वेदान्त Children's Story by ललिता ‘दोषी’ | Ketaketi Online
Home » वेदान्त Children's Story by ललिता ‘दोषी’
वेदान्त Children's Story by ललिता ‘दोषी’
posted by ketaketionline on Sun, 11/25/2018 - 21:47
सात कक्षामा नयाँ विद्यार्थी पसेपछि सबैले मुखामुख गरेर हेरे । नयाँ विद्यार्थी पछिल्लो बेन्चमा गई टुसुक्क बसे ।
कक्षाकै हुल्याहा विद्यार्थी रघुले हकार्दै भने–‘यो बेन्च हाम्रो हो । अर्को बेन्चमा गएर बस् । ’’
नयाँ विद्यार्थी अर्को बेन्चमा गएर बसे । रघुले फेरि भने– यो पनि मेरो साथीको बेन्च हो, अर्कोमा बस् ।’’
रघुले बस्न नदिएपछि नयाँ विद्यार्थी आँखाभरि आँसु पारेर उभिरहे । सक्षमले रिसाउँदै भने–‘चुप लाग रघु, मजाक गर्नुको पनि हद हुन्छ नि ! हामीलाई पो थाहा छ । उनलाई के थाहा तिम्रो बानी यस्तै हो भनेर ?”
कक्षामा पस्दै देवराज सरले भन्नुभयो– ‘‘होइन, किन हल्ला मच्चिएको हँ ?’’
रघुले भने–‘सर ! जीउ सुकेको खुट्टा फुकेको कार्टुन देखेर हाँसो लाग्यो ।’’
सक्षमले उठेर भने– ‘‘सर ! यिनीहरूले नयाँ साथीलाई जिस्क्याएका हुन् ।’
सरले नयाँ विद्यार्थीतिर हेर्दै भन्नुभयो–‘ए त्यसो पो, पीर नगर भाइ यिनीहरू आफ्नो जीउको भैँसी देख्दैनन्, अरूको जीउको जुम्रा देख्छन् । नाम के हो तिम्रो ? कहाँबाट आयौ ?’’
ठिक छ राम्रोसँग पढ तर नडराऊ, यहाँ सक्षमजस्ता विद्यार्थी पनि छन् । तिमी उनैसँगै बस ।”
रघुले विस्तारै भने–“सर पनि कुन ड्याङको मूला हो र ?” रघुको कुरा सुन्ने जति फेरि हाँसे तर सरले सुन्नुभएन ।
सर गएपछि रघुले फेरि भने–‘ओ, डेरा जिन्दावाद ! तिमी अर्कै स्कुलमा सर । यो तिमीजस्ता झासझुसले पढ्ने स्कुल होइन । यो त काठमाडौँ कै टप स्कुल हो, बुझ्यौ ?’’ कक्षाका धेरै विद्यार्थीले ठूलो स्वरमा समर्थन जनाए ।
सक्षमले बेन्च ठटाउँदै भने–‘चुप लाग ! कुकुरको पुच्छर बार वर्ष ढुङ्ग्रोमा राख्यो बाङ्गा बाङ्गै ! भनेको यही हो । सरले सबैको भलो सोच्नु, कसैलाई दुःख नदिनू भनेको बिस्र्यौ तिमीहरूले ?’’
रघुले भने–‘यार, तिमी रिसायौ कि क्या हो ? यस्सो हाँसौँ भनेर ठट्टा गरेको । तिमी त पुरानो साथी । तिमी रिसायौ भने त बोर हुन्छ, ल माफ गर, अब जिस्क्याउन्नौँ ल, भो ।’’
सक्षमले ल ल, भनेपछि रघु खुसी भए । यसरी दिन बित्दै गयो । सक्षम र वेदान्तको मित्रता पनि गहिरिँदै गयो । सर–मिसले असल साथीको उदाहरण दिनु परे उनीहरूकै नाम लिन थाल्नुभयो । उनीहरू दुवै पनि खुसी थिए ।
प्रथम त्रैमासिक परीक्षा भयो । सधैँ प्रथम हुने सक्षम द्वितीय भए । सक्षमलाई आफू द्वितीय हुँदा केही नराम्रो लाग्यो तर वेदान्तको प्रगति देखेर खुसी पनि भए । दिन बित्दै गयो । एक दिन सक्षमले वेदान्त नजिक बस्दै भने–‘वेदान्त के भयो ? किन अँध्यारो मुख लाएको ? मेरो पीर गरेका हौ ? ल, हेर म तन्दुरुस्त छु । हिजो एक दिन नआउँदैमा निराश हुनुपर्छ त ? त्यस्तो केही भएको पनि होइन, अलि–अलि टाउको दुखेको त हो नि !’’
रघुले हाँस्दै भने– “तिम्रो पीरले निराश भएको होइन । हामीले तिमीलाई कुरा लाइदिन्छौँ भनेर नुन खाएको कुखुराजस्तै झोक्राएको हो पाजी ! हिजो त भन्दै थियो म त स्कुलै टप गर्छु ।”
गेहेन्द्रले कुरा थपे–“यो मुसुमुन्द्रे देख्दा मात्र सोझो हो । भित्र भने हँसिया जस्तो रहेछ ।”
निशानले पनि रघु र गेहेन्द्रको कुरामा सहमत हुँदै भने– “सङ्गत गर्दा आफू सुहाउँदो साथीको गर्नुपर्छ भनेको मानेनौ । ल जे होस्, समयमै पाखेको आनीबानी थाहा पायौ , राम्रै भयो ।”
सक्षमले वेदान्तको हात समात्दै भने–“आऊ वेदान्त खेल्न जाऔँ । हेर, तिमीहरू जस्तो खराब साथीले गर्दा असल साथी छुट्टिएका धेरै कथा पढिएको छ, बुझ्यौ ? वेदान्त खराब छन् भन्ने कुरा त म सपनामा पनि सोच्न सक्दिनँ ।”
रघुले फेरि भने–“तिमीले सोच या नसोच, तिम्रो खुसी । यदि ऊ दोषी होइन भने खोइ तिमीले भनेको मानेको ? हेर त घोसेमुन्टो लाएर बसेको ।”
चुपचाप बसेपछि सबैले वेदान्तलाई नै नराम्रो ठाने, घमन्डी उपनाम दिए । कति गर्दा पनि वेदान्त नबोलेपछि भने सक्षमलाई पनि अरू साथीहरूको कुरा पत्याउन करै लाग्यो ।
सक्षमले साथ छाडेपछि सबैले वेदान्तलाई हेप्नु हेपे । रघु, गेहेन्द्रले त यतिसम्म हेपे कि वेदान्तले बीचमै पढाइ छोडेर घर जाने निश्चित गरे । बाबुले केही समय बस भनेकोले मात्र उनी स्कुल आउँदै थिए । रघुहरू कहिले वेदान्तको सर्टमा मसी छर्केर रङ्गाइदिन्थे । कहिले पुच्छर हालेर बाँदर भन्दै थप्पडी पिट्थे । कहिले मार्करले घमन्डी धोकेबाज भनेर सर्टमा लेखिदिन्थे । कहिले कागजको टुक्राटुक्रा पारेर वेदान्तको टाउकोमा हाल्थे । जसले जे भने÷गरे पनि वेदान्त मूर्तिलेजस्तै चुपचाप सहन्थे ।
सक्षम र वेदान्त बोल्न छाडेको केही दिनपछि कक्षामा बसिरहेका वेदान्तको टुप्पी समात्दै रघुले भने–“हेर,यो धोकेबाजको टुप्पी काट्नुपर्छ, कपाल चारपाटा मुडेर मुग्लान कटाउनुपर्छ । ’’ ल, टाउको समाऊ गेहेन्द्र भन्दै कैची निकालेर कपाल काट्नै कस्सिएका के थिए । सक्षमले कैची खोस्दै रघुको गालामा दुई थप्पड लाए । त्यसपछि कक्षाका विद्यार्थीहरू अचम्म मान्दै एक ठाउँमा जम्मा भए ।
वेदान्तले सक्षमको हात समात्दै भने–“बिन्ती ! नकुट फेरि .... ।”
सक्षमले रघुतिर मुड्की देखाउँदै भने–“फेरि के गर्छ यो पाजीले ? वेदान्त ! तिमी मलाई यत्ति धेरै माया नगर यार ! देवराज सरले सबैकुरा .... ।”
सक्षमको कुरा सुनेर सबै जना अलमल्ल परे । सक्षमले पुनः आँखाभरि आँसु पार्दै भने–“सुन साथी हो ! यी नालीका किराहरूले वेदान्तलाई बाटोमा एक्लो पारेर–“तँ सक्षमसँग बोलिस् भने दाइहरू लगाएर सक्षमको हाड भाँचिदिन्छौं । तैंले सक्षमलाई साँच्चै माया गर्छस् भने ऊसँग टाढा हो, भनेछन् । त्यसैले सक्षम मसँग टाढा भएका रहेछन्, सत्य कुरा यही हो । वेदान्त मलाई बचाउन यिनीहरूले गरेको घृणा र दिएको पीडा सहँदै आएका छन् ।”
निशानले डराउँदै भने–“हेर रघु ! मलाई माफ गर । सक्षमले सबै कुरा देखे जस्तै गरी सोधेपछि मैले ढाँट्नै सकिनँ । अर्को कुरा वेदान्तले त सक्षम नै प्रथम होऊन् भनेर नेपालीको ठ्याक्कै दश नम्बरको प्रश्न छोडिदिएका रहेछन् । सरलाई वेदान्तले प्रश्न छोड्नुमा केही सहस्य छ भन्ने सङ्का लागे छ । जाँच सिद्धिएपछि सरले कक्षामा हामीलाई अरू प्रश्न वेदान्तलाई झुक्याएर त्यही प्रश्न सोध्नुभए छ । वेदान्तलाई कुन प्रश्न छोडे भन्ने पनि पत्व भएन छ । उनले खुरुक्क उत्तर दिएछन् । त्यसपछि सरले अड्कल काट्नुभए छ उनले सक्षमलाई प्रथम गराउन चाहेको कुरा । नत्र त उनैले स्कुल टप गर्ने रहेछन् । देवराज सरले सक्षमसँग त्यसै भन्नुभाथ्यो, हैन सक्षम ?”
सक्षमले आँखाभरि आँसु पार्दै भने - मैले वेदान्तको बारेमा र रघुले गरेका कुरा सुनाउँदा सरले भन्नुभयो–‘कौवाले कान लग्यो भन्दैमा कौवाको पछि दौड्नु हुँदैन । पहिला आफ्नो कान छाम्नुपर्छ । मैले आजसम्म वेदान्त जस्तो गुणी मान्छे देखेकै छैन । उनले तिम्रो खुसीको लागि दुःख सहेको हुन् । नपत्याए सबै देखेजस्तै गरी कुरा धुत सत्य तिम्रो सामु आउछ । त्यसपछि तिमीले केही दिन वेदान्त र रघुहरू बीचको अन्तर हेर ।’ हो, त्यसैले मैले सबै कुरा थाहा पाएर पनि वेदान्तको पीडा चुपचाप हेरिरहेको थिएँ । वास्तवमै वेदान्त र रघु बीच आकाश पातलकै अन्तर छ । ‘हीरा सानो भए पनि बहुमूल्य हुन्छ’ सरले भनेको कुरा सत्य हो । वेदान्त हीरा नै हुन् ।
वेदान्तले भने–“हामीले कहिल्यै पनि अरूको नराम्रो सोच्नु हुँदैन । जसले अरूको नराम्रो सोच्छ त्यही खाल्डोमा पर्छ रे आमाले त्यसै भन्नु हुन्छ ।”
सक्षमले भने–“तिम्रो कुरा त ठिकै हो तर धेरै आदर्श बने पनि दुःख नै हुन्छ नि ! सबैले थाहा पायौ होइन रघु र वेदान्तमा कति अन्तर छ ?’’
सक्षमको कुरा सुनेपछि सबैले एकै स्वरमा भने‘साह्रै असल मान्छे र जेहेनदार विद्यार्थी त वेदान्त पो रहेछन् ।’’
रघु र गहेन्द्रले वेदान्तसँग माफ माग्दै भने ‘‘ अब हामी पनि तिमीजस्तै असल बन्छौँ । यस्ता गल्ती कहिल्यै गर्दैनौँ । हामीलाई आज राम्रोसँग थाहाभयो जति ढाटे पनि वास्तबमा सत्य कै जीत हुनेरहेछ ।’’
सक्षमले कुरा थपे– “हेर, साथी हो, हामीले के भुल्नु हुँदैन भने रघुजस्ता साथीहरूले पछुताउनु पर्छ । रघुहरू भनेझैँ ढिलो हुन्छ तर जीत सत्यकै हुन्छ ।”
हो, हो, भन्दै सबैले सक्षको कुरामा सही थापे । टिनिनी घण्टी बज्यो, सबै जना वेदान्तको तारिफ गर्दै घरतिर लागे । वेदान्त र सक्षम पनि मीठा–मीठा कुरा गर्दै घरतिर लागे । वेदान्तले मनमनै सक्षमजस्तो साथी दिएकोमा भगवान्लाई धन्यबाद भने ।